Waa rasmi: bisha Sebtember 10 waxaan arki doonaa iPhone-ka cusub | Wararka IPhone
Waxay ahayd sir furan: 10-ka Sebtember waxay noqon doontaa maalinta Apple soo bandhigi doonto iPhone-ka cusub. Mid ka mid ah maalmaha sanadka ee sida weyn loo wada sugo isla markaana soo saarta rajada ugu badan adduunka ee teknolojiyadda Waxay horay u leedahay taariikh waxaanan ku calaamadin karnaa jadwalka taariikhda oo casaan ah. Meeshu ma noqon karto mid kale: Tiyaatarka Steve Jobs ee ku yaal Apple Park.
Waan ogaan doonaa IPhone-ka cusub, kaas oo aan u malayno inaan ognahay inta badan faahfaahinta laakiin ma cadayn magaca inay heli doonaan. Waxaan sidoo kale hubaal ahaan arki doonnaa Apple Watch Series 5 cusub, iyo wararkii ugu dambeeyay ee iOS 13, watchOS 6 iyo macOS Catalina ay noo keeni doonaan, maxaa yeelay Apple marwalba waxay leedahay xeelado kor u qaada shaarka ilaa maantadan la joogo.
Maalintaas 10:00 (waqtiga maxalliga ah ee Cupertino, California) waxaan arki doonnaa iPhone-ka cusub (iPhone 11?), Taas oo ay u muuqato in ereyga Pro uu soo muuqan doono markii ugu horreysay si loogu qoro "ugu sarreeya" baaxadda , sida ay ku dhacdo ipad iyo MacBooks. Ma jiri doonaa iPhone Air sida qaybaha kale ee Apple? Kaamirada seddex-geesoodka ah, hagaajinta xaqiiqda la kordhiyay iyo midabka cusub qaarkood waxay umuuqdaan inay yihiin horumarada ugu weyn ee qalabkan sida ku cad xogaha, laakiin waxaan sugeynaa wararka ay ka mid noqon karaan softiweer ama wax lala yaabo oo aan weli waxba ka soo bixin. Goorma ayey noqon doontaa dalalka intiisa kale?
Spain (Jasiiradda Iberian): 19:00
Jasiiradaha Canary: 18:00
Mexico, Ecuador, Colombia, Peru: 12:00
Venezuela, Chile: 13:00
Waxaan sidoo kale arki doonnaa Apple Watch 5, oo umuuqda mid aan wax war ah ka haynin dhanka qalabka marka laga reebo agabyada cusub sida dhoobada iyo titanium. watchOS 6 waxay keeneysaa astaamo badan oo cusub, gaar ahaan marka la eego fursadaha loogu talagalay horumariyeyaasha taasna waxay umuuqataa inay tahay sharad sanadkan qalab gaadhay qaan-gaadhnimada iyo isu-dheellitirka jiilkiisa afraad si uu ugu dambayn u noqdo aalad "wareegsan". Ma jiri doonaa iPad Pro cusub? Ma arki doonaa 16-inch MacBook Pro? Waxay umuuqataa wax aan dhici karin, waana inaan sugno dhacdo kale horeyba Oktoobar, sida ku dhacday munaasabadaha kale. Haa, waxaan hubaal ku arki doonnaa wararka ku jira adeegga qulqulka ee Apple, iyo laga yaabee faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taariikhaha bilaabista, qiimaha, iwm. Dabcan, waxaan kula socon doonnaa dhacdada boggeena si aanad waxba u seegin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Waa rasmi: bisha Sebtember 10 waxaan arki doonaa iPhone-ka cusub
Master Pokémon hadda waxaa laga heli karaa App Store